Waxay umuuqataa in Apple Silicon M2 uu horey usocon lahaa wax soo saar | Wararka IPhone
Waxay u muuqataa in Apple Silicon M2 horeyba u ahaan lahaa wax soo saar
Imaatinka processor-ka cusub ee kombiyuutarada Mac-da ayaa shaki la’aan dharbaaxo ku ah miiska shirkadda Cupertino. Hada kuwaan Processor-yada Apple Silicon M1 waa kuwa ugu awoodda badan, kuwa sida ugu wanaagsan u maareeya qalabka iyo shaki la’aan kuwa ugu jaban. labadaba adeegsadayaasha iyo shirkada lafteeda.
Waxay u muuqataa in jiilka soo socda ee M2 chip "horeyba ugu jiri lahaa foornada" sida ay yiraahdaan. Tan waxaan uga jeednaa midkoodna inuusan xaqiijin dhowr saacadood ka hor in processor-rada cusub ee Apple ay horey u ahaan doonaan wax soo saar. Waxaa jiray shaki ku saabsan ikhtiyaarka M1X chip ama si toos ah u bood M2 iyo Waxay umuuqataa in kani ugu danbeyntii noqon doono midka imaado inta lagu gudajiro qeybta labaad ee sanadkan.
Waxaa la yaab leh Apple ayaa sii daayay cusub iPad Pro 20-kii Abriil ee la soo dhaafay oo leh processor-ka M1 sidaa darteed waxaa lagu xantaa in shirkaddu aysan soo saareyn processor cusub illaa sanadka dambe. Waxay umuuqataa in ugu dambeyn arintu sidan noqon doonin oo shirkada Cupertino ay durbaba diyaarisay qeybtii labaad ee processor-radan xoogga badan
Waxay noqon kartaa in processor-rada cusubi ay horeyba ula yimaadeen xoogaa asal ah ama xitaa transistors yar yar, tani waxay ka dhigeysaa waxtarka tamarta mid aad u wanaagsan oo macquul ahaana inay aad u awood badan yihiin Waxay u egtahay markaa ka hor dhamaadka sanadka waxaan lahaan doonnaa processor-yo M2 oo cusub labada MacBook Pro iyo iMac waana taas 27-inch iMac lama soo bandhigin 20-kii Abriil ee la soo dhaafay. Mid MacRumors waxay ku dhawaaqeen warka ay daabacday Nikkei sidaa darteed warka aakhirki wuxuu ku faafay sida dabka ka kacay shabakada oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Waxay u muuqataa in Apple Silicon M2 horeyba u ahaan lahaa wax soo saar
Dammaanad 3-sano ah oo qasab ah ayaa loo gudbiyay dhammaan alaabooyinka, oo ay ku jiraan Apple
Maalinta Hooyada iyada uga yaabi hadiyadan